ကျွန်မဘ၀ ကျွန်မအကြောင်း တစေ့တစောင်း – Pann Satt Lann Books
ကျွန်မဘ၀ ကျွန်မအကြောင်း တစေ့တစောင်း စာအုပ်လေးက ဆရာမရဲ့ နောက်ဆုံးရေးသားထားတဲ့ စာအုပ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်မှာ..ပါတဲ့ စာစုတွေဟာ Facebook မှာ ပေါက်ခဲ့တဲ့ စာစုလေးတွေပါ။ ကျွန်မရဲ့ ငယ်ဘဝအကြောင်း၊ မိသားစုဝင်တွေအကြောင်း၊ မိတ်ဆွေ..သူငယ်ချင်းတွေနဲ့..အသက်၄၀မှာဘယ်လိုတွေးသလဲဆိုတဲ့ အတွေအမြင်တွေအပါအဝင် စုစုပေါင်း စာစုတွေ အပုဒ်၆၀ကျော်ပါပါတယ်.။ စာမျက်နှာ ၂၄၅မျက်နှာပါ..ပါတယ်။ ဆရာမရဲ့ စာချစ်ပရိသတ်လေးတွေအတွက် စုစည်းပေးလိုက်ပါတယ်…..
ပန်းဆက်လမ်း၊ 2021 ဇူလိုင်၊ (ပဉ္စမ-ကြိမ်)
ကျွန်မဘ၀ ကျွန်မအကြောင်း တစေ့တစောင်း အား ဝေဖန်သုံးသပ်မှု3ရှိပါသည်။
Helianthus – December 9, 2020
ကျွန်မဘ၀ကျွန်မအကြောင့် တစေ့တစောင်း စာအုပ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာမရဲ့စာအုပ်ကို၀ယ်တာ ဒုတိယမြောက်စာအုပ်လေးဖြစ်ပါတယ်။
ပထမစာအုပ်က ဟန်ချက်ညီသောဘ၀ စာအုပ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ ပထမစာအုပ်မှာထဲက book review လေးကို ရေးချင်တာပါ။ ပထမစာအုပ်ကိုဖတ်တာ ရှေ့နှစ်ခန်းကနေမတတ်တော့ဘူး။ အရမ်းဖတ်ကောင်းလို့ပါ?? recommedပေးမယ်ဆိုရင် တစ်အုပ်လုံးကုန်မှာ??
စာအုပ်လေးကိုဆက်ကြစို့?? အမှန်တွေအများကြီးတွေးနိုင်တာ အမှားတွေသိပ်များခဲ့လို့ပါ….မွန်ဟော်စီ… အဲ့စာကြောင်းလေးနဲ့စထားပါတယ်။ အပိုင်းလေး(၇)ပိုင်းပါ၀င်ပါတယ်။ Bonous လေးလည်းပါပါတယ်??
ဆရာမရဲ့အန်တီလေးက သူ့ဖေဖေကိုပြုစုတာကိုမငြိုငြင်ပဲ ဖေဖေ့ကိုဖက်ပြီး ကုသိုလ်ထုပ်ကြီးတဲ့
အဲ့စာကြောင်းလေးကိုဖတ်မိတော့ မြင်စိထဲမှာမြင်ပြီး ကြည်နူးမိတယ်
ဖေဖေပဲဖြစ်ဖြစ် မေမေပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်ပေးရတဲ့ကုသိုလ်ဟာ အန်မတန်မှကုသိုလ်ရပါတယ်
ခဏလေးအတွင်းမှာ ကိုယ်ဆိုတာရှိနေဖို့ မသေချာပါဘူး
မနက်ခင်းမှာကျတဲ့နှင်းစက်၊နှင်းရည်လေးတွေလိုမျိုး မြက်ပင်လေးမှာတွဲလွဲခိုနေတဲ့ ခဏ နေရောင်လေးလာရင် ကွယ်ပျောက်ရပါတယ်
လှန်းထားတဲ့အ၀တ်လေး မခြောက်ခင် ကိုယ်ဆိုတာ ရှိပါအုံးမလား
တွေ့ဆုံရတဲ့အခိုက်လေးမှာ အမှားနည်းအောင် ဂရုစိုက်ရပါအုံးမယ်
မောင်လေး ညီမလေးများသည် ကျွန်မတို့မိခင်ထံမှရသော အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်မွန်လေးများဖြစ်ကြပါသည်
မှန်ပါသည်။ မောင်လေးဆိုလည်း ကိုယ့်အတွက်အဖော်လေးဖြစ်သည်၊ညီမလေးဆိုလည်း ပိုပြီးအဖော်ဖြစ်နိုင်သည်။
မောင်နှမဆိုတာ အစားမရလို့…. မိဘတွေမရှိတော့တဲ့နောက် မောင်နှမအချင်းချင်း ဘယ်သောအခါမှ စိတ်၀မ်းမကွဲကြပါစေနဲ့
ညီအစ်ကိုမောင်နှမဆိုတာ သစ်ပင်တစ်ခုရဲ့ အကိုင်းအခက်တွေလိုပါပဲ၊ဘယ်အကိုင်းကဘယ်ဘက်ကိုထွက်သွားထွက်သွား အမြစ်တစ်ခုထဲရယ်၊ပင်စည်တစ်ခုထဲက ဖြာထွက်လာတာပါပဲ
ဖတ်ရင်း၀မ်းနည်းမိတယ်၊ မေမေ(ဆရာမ)ကသိပ်ဂရုစိုက်တာပဲ၊stay with Daddy forawhile.Mommy will be back.အဲ့နားလေးမှာ ဘာရယ်မဟုတ် ရင်ထဲမှာစို့နစ်သွားရတာ။ ကိုယ်တိုင်မမွေးဘူးပေမဲ့ တိရိစ္ဆာန်လေးတွေက သူ့တို့အပေါ်ကြင်နာတဲ့သူတွေကို အရမ်းခင်တတ်ကြပါတယ်
သန့်ရှင်းတဲ့၊ရိုးရှင်းတဲ့ ကိုယ့်ခင်မင်မှုတွေကို ဖားနေတဲ့သူနဲ့ ရောပြီး အရောင်ဆိုးခံရမှာ ကြောက်လို့ပါပဲ။အဝေးကပဲ ချစ်နေပေးလိုက်တော့တယ်။ အလိုလိုနေရင်း ကျွန်မအနောက်ကို ဆုတ်နေတတ်မိတယ်။
အစစ်အမှန် ခင်မင်မှုဆိုတာ ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ စိတ်ရင်းနဲ့ခင်တတ်တဲ့ မိတ်ဆွေဆိုတာ အင်မတန်ရှားသွားတယ်
ဘာလုပ်မှာလည်း လူ့ဘ၀ဟာ အချိန်တွေ သိပ်နည်းပါတယ်၊အစစ်အမှန်တွေနဲ့ ရှင်သန်ရတာက ဘ၀ကို ပိုပြီးစိုပြည်စေမှာ အမှန်ပဲ။ ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ်ပဲရှင်သန်ပါ
တစ်ယောက်ယောက်ကို လိုက်ဖားနေရတယ်ဆိုတာ အရမ်းပျင်း၀ရာကောင်းတဲ့အလုပ်ကြီးပါ
ဆရာမအကြောင်းဆိုပေမဲ့ ဖတ်တဲ့သူက သူကိုယ်တိုင်မဟုတ်တဲ့အခြားသူရဲ့အကြောင်းတွေ၊ ဖြတ်သန်းလာခဲ့ပုံတွေ၊ တွေဆုံခဲ့ရသူတွေအကြောင်းတွေကိုဖတ်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်
မြဉ္ဇူ သက (verified owner) – March 7, 2022
Shwe Yamin Aye (verified owner) – March 7, 2022
*မင်္ဂလာပါဆရာမ* ပထမဦးဆုံး ဆရာမကို စသိခဲ့တဲ့ စာအုပ်လေးပါ
အရမ်းကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့ရပြီး အဲ့‌နောက်တော့ ဆရာမစာအုပ်ကို မပြတ်ဖတ်ခဲ့တာ ခုချိန်ထိပါ
ပျော်ရွင်စရာ ၀မ်းနည်းစရာလေးတွေ ဝေမျှပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျမအတွက် စာအုပ်သူငယ်ချင်း‌လေးတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်